एन्ड्रोइडका लागि डाउनहिल स्म्याश एपीके डाउनलोड [खेल] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि डाउनहिल स्म्याश एपीके डाउनलोड [खेल]
डिसेम्बर 10, 2021 by जोन स्मिथ
यद्यपि विभिन्न श्रेणी दौड खेलहरू यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा प्रकाशित छन्। ती रेसिङ गेमहरू पनि कार वा बाइक रेसिङसँग सम्बन्धित छन्। तैपनि आज हामीले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूका लागि DownHill Smash Apk नामक नयाँ रेस गेमिङ एप ल्याएका छौं।
यो २ डी गेमप्ले भौतिक विज्ञानमा आधारित गतिशीलतामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। जहाँ विभिन्न बुस्टरसहितको शक्तिशाली इन्जिन प्रयोग गरी रोलर गाडीलाई जमिनमा गुडाइयो। यद्यपि विभिन्न अन्य बाधाहरू पनि जमिनमा देखा पर्न सक्छन्।
ती अवरोधहरू नष्ट गर्न हतियार सहायताको साथ शक्तिशाली चाल चाहिन्छ। विज्ञहरूले पनि धेरै अन्य उपकरणहरू थपेका छन्, जसले गेमप्लेमा जोम्बीहरू नष्ट गर्ने मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईं यस नयाँ गेमिङ प्लेटफर्मको मजा लिन तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि डाउनहिल स्म्यास डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
DownHill Smash Apk के हो
DownHill Smash Apk एक अनलाइन रेसिङ गेमिङ प्लेटफर्म हो, जहाँ रेसरहरूलाई प्रो स्रोतहरू प्रयोग गरेर छिटो सार्न आवश्यक हुन्छ। एक पटक मेसिन राम्रो गति प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। अब नजिकै आउने अवरोधहरू शक्तिशाली स्ट्राइक प्रयोग गरेर नष्ट हुनेछन्।
याद गर्नुहोस् कि हामीले पहिले उल्लेख गरेका थियौं कि गेमप्ले विशुद्ध रूपमा संरचित फोकस फिजिक्स हो। जहाँ भारी रोलर माथिल्लो पहाडबाट तल जमिनमा स्लाइड हुनेछ। यद्यपि गति र भारी द्रव्यमानले बाधाहरू नष्ट गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छ।
तर मेसिन चलाउन अन्य आवश्यक स्रोतहरू पनि चाहिन्छ। जसमा फ्युल, मास, ड्यामेज, बूस्टर, जम्पर, कोइन कलेक्टर, इन्जिन, डमेज इत्यादि पर्छन्। यी मध्ये कुनै पनि उपकरण अपग्रेड गर्दा मेसिनको कार्यसम्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ।
यद्यपि ती वस्तुहरू अपग्रेड गर्न सुनको सिक्का र रत्नहरू चाहिन्छ। यद्यपि सुनको सिक्का कमाउनु एक सरल प्रक्रिया हो, केवल मैदान भित्र भाग लिनुहोस् र सजिलैसँग स्रोतहरू कमाउनुहोस्। त्यसैले तपाइँ प्रो गेमिङ अनुभव मन पराउनुहुन्छ त्यसपछि डाउनहिल स्म्यास गेम स्थापना गर्नुहोस्।
नाम डाउनहिल स्मैश
आकार 95 एमबी
प्याकेज नाम com.zeptolab.downhillsmash
आवश्यक एन्ड्रोइड ..8.0.। र प्लस
श्रेणी खेल - दौड
गेमप्ले आफैमा हल्का वजन हो र कम स्रोतहरू खपत गर्दछ। जसको अर्थ या त पुरानो स्मार्टफोन बोक्ने गेमर। उसले समस्याहरू अनुभव नगरी एन्ड्रोइड मोबाइल भित्र गेमप्ले सजिलै डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्छ।
अहिले सम्म हामी भित्र कुनै पनि तेस्रो पक्ष लेआउट वा विषयवस्तुहरू देख्न असमर्थ छौं। तर विशेषज्ञहरूले दाबी गर्छन् कि गेमप्लेले धेरै नक्साहरू प्रदान गर्दछ। स्तर पूरा गरेपछि, यसले गेमरलाई अर्को स्तरमा रिडिरेक्ट गर्नेछ। जहाँ बाधाहरू धेरै बलियो र कठिन हुन्छन्।
इन्जिन जस्ता आवश्यक वस्तुहरू अपग्रेड गर्नाले जोम्बी मार्ने मेसिन निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। विभिन्न अन्य हतियारहरू जस्तै मेसिन गन र रकेटहरू संलग्न छन्। त्यसोभए ती अवरोधहरू हटाउन समयमै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ल्यापहरू पूरा गर्दा, गेमरले मालिकहरूसँग झगडा प्रस्ताव गर्न सक्छ। मालिकहरू बलियो छन् र तिनीहरूलाई हटाउनका लागि कठिन सीपहरू चाहिन्छ। त्यसैले हामी सिफारिस गर्छौं कि खेलाडीहरूले पहिले हतियार मेसिनरी अपग्रेड गर्नुहोस् त्यसपछि मालिकहरूलाई हराउने प्रयास गर्नुहोस्।
यो एन्ड्रोइड गेमरहरूका लागि उनीहरूको खेल्ने सीपहरू एक्सेल गर्ने उत्तम मौका हो। लडाई क्षेत्र भित्र भाग लिई र जोम्बीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा नष्ट गर्नुहोस्। तेस्रो पक्ष विज्ञापनहरू हेर्दा अन्य स्रोतहरू अनलक गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैले तपाईलाई गेम थिमहरू मनपर्छ त्यसपछि यहाँबाट डाउनहिल स्म्यास एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस्।
तर स्क्रिन माथि खेलाडीहरू देखिनेछन्।
विज्ञापनहरू हेर्दा विभिन्न वस्तुहरू अनलक गर्न मद्दत गर्नेछ।
खेल प्रदर्शन सुधार गर्न पनि मद्दत गर्छ।
इन्टरनेट बिना, यो खेल खेल्न असम्भव देखिन्छ।
धेरै वस्तुहरू समयमै अपग्रेड गर्न आवश्यक छ।
DownHill Smash Apk कसरी डाउनलोड गर्ने
हाल, गेमिङ एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न पहुँचयोग्य छ। तर केही अनुकूलता मुद्दाहरूमा, यसलाई प्रतिबन्धात्मक खण्डमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसको मतलब केवल मिल्दो उपकरणहरूले Apk फाइल पहुँच गर्न अनुमति दिन सक्छ। त्यसोभए यस्तो अवस्थामा पुराना एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले के गर्नुपर्छ?
तसर्थ तपाईं अन्योलमा हुनुहुन्छ र गेमिङ फाइल डाउनलोड गर्न सुरक्षित अनलाइन प्लेटफर्म खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी गेमरहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् र कुनै पनि अनुमति बिना गेमप्ले सजिलै डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्छौं। एपीके फाइल डाउनलोड गर्न तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
हामीले यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा प्रदान गर्ने गेमिङ एप फाइल विशुद्ध रूपमा सुरक्षित छ। हाम्रो विशेषज्ञ टोलीले पहिले नै विभिन्न स्मार्टफोनहरूमा गेमप्ले स्थापना गरिसकेको छ र कुनै समस्या फेला पारेको छैन। त्यसैले गेमिङ एप डाउनलोड र इन्स्टल गर्नु विशुद्ध रूपमा सुरक्षित छ।
यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामीले पहिले नै धेरै अन्य रेसिङ गेमिङ एपहरू साझा गरेका छौं। ती अन्य सापेक्ष गेमिङ एपहरूको मजा लिन कृपया लिङ्कहरू पछ्याउनुहोस्। जो हुन् Balap Drag Liar Apk र फन रेस थ्रीडी APK.
त्यसैले तपाइँ दौड खेल खेल्न र नयाँ अद्वितीय गेमप्ले खोज्न मनपर्छ। त्यसपछि हामी ती एन्ड्रोइड खेलाडीहरूलाई DownHill Smash Apk डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्छौं। जुन यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिने एक क्लिक विकल्पको साथ निःशुल्क छ।
विभाग दौड, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, डाउनहिल स्म्याश एन्ड्रोइड, DownHill Smash Apk, डाउनहिल स्म्याश डाउनलोड, डाउनहिल स्म्यास खेल मेल अन्वेषण
एन्ड्रोइडका लागि GCash Apk डाउनलोड [E-Wallet]
ड्रीम लीग सकर २०२२ एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [नवीनतम]